यस्ती छिन नायिका प्रियंकाकि छोरी आयन्का, निकै खुशी हुदै छोरीलाई खेलाएको भिडियो सार्बजनिक – Sandesh Press
September 26, 2021 96
अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनेकी छन्। उनले बुधबार छोरीलाई जन्म दिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिईन। छोरीसँगको फोटो पोस्ट गर्दै उनले आफू आमा बनेको फेसबुक मार्फत् जानकारी दिएकी थिइन्।
उनले फेसबुकमा सुन्दर संसारमा छोरी आयंका कार्कीलाई स्वागत छ भनेर लेखेकी छिन्। फोटोमा उनका श्रीमान् आयुष्मान देशराज जोशी पनि निकै खुशी देखिएका थिए। उनले यसअघि नै छोरीको नाम आयंका भनेर सार्वजनिक समेत गरेकी थिइन्।
श्रीमान् आयुस्मान र आफूले छोरीलाई काखमा लिएको तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी थिइन् । छोरीको नाम आयन्का कार्की जोशी राखिएको जानकारी दिएका हुन् । गत वर्षको चैत २० गते प्रियंकाले आफू गर्भवती भएको जानकारी दिएकी थिइन्। उनले ‘वि आर प्रेग्नेन्ट’ भन्दै फोटो सेयर गरेकी थिइन्। ।
पछि गर्भवतीमा खिचेका फोटो र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा उनी बहसको नै विषय बन्न पुगेकी थिइन्। प्रियंका र आयुष्मान २०७६ साल फागुन १६ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए।अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनेकी छन्। उनले बुधबार छोरीलाई जन्म दिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिईन। छोरीसँगको फोटो पोस्ट गर्दै उनले आफू आमा बनेको फेसबुक मार्फत् जानकारी दिएकी थिइन्।
पछि गर्भवतीमा खिचेका फोटो र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा उनी बहसको नै विषय बन्न पुगेकी थिइन्। प्रियंका र आयुष्मान २०७६ साल फागुन १६ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए।
Prevखुट्टाको औँलाको आकारबाट मान्छेको स्वभाव थाहा पाउनुहोस्, बुढी औँला ठूलो हुने व्यक्ति ‘स्मार्ट’
Nextनेपालबाट दिल्ली जाँदै गरेको बस दु’ र्घटना १७ जनाको मृ’ त्यु
पतिका लागि भाग्यशाली हुन्छन् यस्ता पत्नी, विवाहपछि बनाइदिन्छन् धनवान
भ्वाइस अफ नेपालमा नयाँ कोच, दीप श्रेष्ठ ठाउँमा अब राजेशपायल राईले सम्हाले कार्यभार
काठमाडौँ बाहिर जाने यात्रुसँग तोकिएभन्दा बढी भाडा लिन खोज्ने नौ जना पक्राउ
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10235)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10182)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (5853)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (5760)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (5409)
सं’ क्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आ’ इसियुमा राखेर उ’ पचार सुरु (3127)
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमण (2280)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (2089)
नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत निशालाई अपरिचित ब्यक्तिले अस्पताल भित्र पसेर जुस खुवाएपछि निशाको अवस्था बिग्रियो (1995)
मन्त्रिको गाडी समात्ने बहादुर प्रहरी, भन्छन- ‘ठूलो सानो भनेर जो कोहीको पनि छोड्ने कुरा हुँदैन’ (1786)
हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट, पेशा- गृहिणी ?
अण्डाको मूल्य झण्डै दोब्बरले वृद्धि, ठगिए उपभोक्ता